प्रदेशका मन्त्री भन्छन्, ‘हामीलाई शाखा कार्यालयसरह ठानियो’
सातवटै प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले शाखा कार्यालयसरहको हैसियतमा राखेको गुनासो गरेका छन् । सातै प्रदेशका मन्त्रीले आइतबार संयुक्त रूपमा संघीय मन्त्रीहरूलाई भेटी संघीयताको सुन्दर पक्ष नभुल्न ध्यानाकर्षण गराए ।
देवदहमा अब बाच्छी मात्रै
रूपन्देहीको देवदहका गाईले अब बाच्छी मात्रै जन्माउनेछन् । देवदह नगरपालिकाले दूध उत्पादन बढाउन गाईलाई सेक्स सिमोन (कृत्रिम गर्भाधानको एक विधि) दिन लागेको छ । यसपछि गाईले बाच्छी मात्रै जन्माउनेछन् ।
पेकिङ विश्वविद्यालयमा पोस्टडक गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिक डा. नवल श्रेष्ठले पत्ता लगाएको उन्युको वैज्ञानिक नाम उनकै थरबाट राखिएको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बराल भन्छन्, 'डा. केसीको अडानले वार्ता हुन सकेन'
माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदासमेत नेपाल र भारतको सीमामा सफल हुन नसकेको परिचयपत्र तथा सीमा रजिस्ट्रेसन अहिले पुन: अभ्यासमा ल्याउन दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सुझाव दिएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ ।
देउवाले विदेश भ्रमण स्थगित गरे
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सिंगापुर भ्रमण स्थगित गरेका छन् ।
कानुनमन्त्रीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको भर्त्सना
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययन गरिसकेका र अध्ययनरत युवतीप्रति लक्षित आपत्तिजनक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । तामाङले आफ्नो अभिव्यक्तिका बारेमा विज्ञप्तिमार्फत माफी मागिसकेका छन् ।
कुरूप बन्दै राजधानी, घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो बनाउने तयारी
मूलपानीको तिवारी टोलबाट ५० मिटर अघि बढ्दा कतै हरियाली देखिँदैन । दुई वर्षअघि हराभरा देखिने उक्त डाँडामा अहिले डोजर चलेकोमात्र देखिन्छ । २ सय रोपनी जमिन सम्याएर धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ । वरपरका डाँडा पनि चक्लाबन्दी गरेर बिक्री भइसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी मागेका छन् । उनले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर साउन ४ गते प्राक्टिस इन्टरनेशनल एकेडेमीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो भनाइले बंगलादेशमा अध्ययनरत र अध्ययन गरी फर्केका छात्राहरुलाई चोट पर्न गएको भन्दै माफी मागेका हुन् ।
मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग
सत्ता पक्षीय युवा र विद्यार्थी संगठनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले केही स्थान हड्ताल–जुलुस गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
कान्तिपुरकर्मीलाई 'नेजा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार'
यसवर्ष 'नेजा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार' कान्तिपुर दैनिकका ओखलढुंगा संवाददाता कुम्भराज राईलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका थाँक्रेमा ट्रकले एक ८ वर्षीय बालकलाई किच्दा आधा घण्टादेखि सडक अवरुद्ध बनेको छ ।
[अपडेट] ट्रकले ठक्कर दिँदा मोटरइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तिनाउ गाँउपालिका–३ दोभानबजार नजिकै ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्थानीयको कुटपिटबाट दुई झाक्रीको मृत्यु
गंगाजमुना गाँउपालिका–२ लताकमा स्थानीयको कुटपिटबाट २ जना झाक्रीको मृत्यु भएको छ । शनिबार ६५ वर्षीय युरुक तामाङ र ७० वर्षीय क्लेक तामाङको मृत्यू भएको हो ।
‘बोल्न विवश भएँ’
निदाएको बेला पनि चिन्ता लाग्छ, डा. केसीलाई के भयो होला भनेर । बिहान उठेपछि पनि मोबाइलमा खबर हेर्छु । घडीको सुईजस्तो मन खित्रिकखित्रिक भइरहन्छ । सरकारको मानो खाएर के बोलेको भन्लान् तर विवश भइयो । किनकि एउटा मान्छे मृत्युशय्यामा छ । डा. केसीले आज जे मागेका छन्, त्यो उनले आफ्ना निम्ति मागेका होइनन् । जनताका निम्ति, तपाईं–हाम्रा निम्ति मागेका हुन् ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ७, कात्तिकेका बडीराज राई एक रुपैयाँ लिटरका दरले पानी किनेर घर ठड्याउँदै छन् । उनलाई ढुंगाको पनि उस्तै समस्या छ । भूकम्पले घर भत्किएको ३ वर्ष पुग्दा पनि पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन् । ‘पानीको हाहाकार छ, ढुंगा पनि पाइँदैन,’ उनले भने ।
गत आवमा सीमा–नाका कृष्णनगर हुँदै बाहिर जान लागेका १ सय ५२ महिलाको उद्धार गरिएको छ । दलालले विभिन्न प्रलोभन दिएर गैरकानुनी र असुरक्षित तरिकाले भारत र तेस्रो मुलुक लैजान लागेका बेला उनीहरूलाई शान्ति पुन:स्थापना गृहले उद्धार गरेको हो ।
द्वन्द्वपीडितको राहत फिर्ता
द्वन्द्वपीडित राहत रकम फिर्ता भएको छ । कर्मचारीको लापरबाहीले १७ लाख ७५ हजार फिर्ता गएको हो । गृह मन्त्रालयले द्वन्द्व विस्थापितमध्ये ७९ जनालाई २५ हजारका दरले राहत बाँड्न रकम पठाएको थियो । कर्मचारीले कागजी प्रक्रियामा त्रुटि गरेपछि रकम फिर्ता भएको छ ।
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएको आरोप खेपेको मलेसिया भीएलएन प्रालिलाई वैदेशिक रोजगार विभागकै तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले संरक्षण गरेको भेटिएको छ ।
अवैध बाटो टर्की
‘माइनस डिग्रीको चिसो । घनघोर जंगलको बाटो । दिनभरि सुत्ने अनि रातभरि बत्ती पनि नबाली अन्दाजका भरमा खोला, खोल्सी हिँडदा कस्तो हुन्छ भन्नुस् ?’ नवलपरासी, कावासोतीका टीकाराम भट्टराईले प्रश्नबाटै कुरा सुरु गरे । गत मंसिरमा बीसदिने पर्यटक भिसामा दिल्लीबाट बहराइन हुँदै टर्की पुगेका उनी अन्य नेपालीझैं टर्कीबाट अवैध रूपमा ग्रिस प्रवेश गर्न खोजका थिए ।
केन्द्रलाई प्रदेशहरूको चेतावनी, ‘अधिकार खोसे विकल्प खोज्छौं’
आफू मातहत तोकिइसकेका कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार खोसिए विकल्प खोज्ने चेतावनी संघलाई प्रदेश सरकारहरूले दिएका छन् । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरू आफैंमा खिच्ने निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पत्राचारसमेत गरेका छन् ।